ACE inhibitors vs. beta blockers: ဘယ်သွေးတိုးရောဂါကသင့်အတွက်သင့်တော်ပါသလဲ။ - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီသတင်း ရပ်ရွာ၊ သတင်း၊ ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ဖျော်ဖြေရေး နှိပ်ပါ သတင်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> ACE inhibitors vs. beta blockers - ဘယ်သွေးဖိအားကိုသင့်အတွက်ပေးသင့်သလဲ။
ACE inhibitors vs. beta blockers - ဘယ်သွေးဖိအားကိုသင့်အတွက်ပေးသင့်သလဲ။
အမေရိကန်လူကြီးခုနစ်သန်းငါးသန်းသည်သွေးတိုးရောဂါ (သွေးတိုး) ရှိသည် 54% သူတို့ထဲကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာသူတို့ရဲ့အဆင့်ဆင့်ရှိသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာမြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်ကဲ့သို့အဖြစ်များသည့်အခြေအနေတစ်ခုအတွက်ကူညီနိုင်သည့်ဆေးများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ ACE inhibitors နှင့် beta blockers တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဆရာဝန်အများစုသည်အခြားမည်သည့်ဆေးအမျိုးအစားမဆိုမတိုင်မီသူတို့သတ်မှတ်ပေးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်လက္ခဏာမပြပါကသွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားသည့်လူများကဲ့သို့ပင်ဆရာဝန်က ACE ကိုတားဆီးပေးသူကိုအရင်စမ်းပါလိမ့်မည်။ သင်၏သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားသောရင်ဘတ်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်တွဲဖက်ပါက beta blocker သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်ဆရာဝန်များသည်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသွေးတိုးဆေးကဘာလဲ။ သင်၏နောက်ဆရာဝန်လာရောက်လည်ပတ်ရန်ပြင်ဆင်ရန် ACE inhibitors နှင့် beta blockers တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်ဤလမ်းညွှန်ကိုသုံးပါ။
Acebutolol HCL တွင်အကောင်းဆုံးစျေးကိုလိုချင်ပါသလား။
Acebutolol HCL စျေးနှုန်းသတိပေးချက်များအတွက်စာရင်းသွင်းပါ။
ACE inhibitors နဲ့ beta blockers ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
ACE inhibitors (angiotensin-converting-enzyme inhibitors) သည်သွေးကြောများကိုတိုးစေပြီးသွေးပမာဏကိုလျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုကျဆင်းစေပြီးနှလုံးသို့သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးစေသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့, ACE inhibitors angiotensin-converting enzyme ကို angiotensin I အဖြစ်သို့ angiotensin-II သို့သွေးကြောများကန့်သတ်ပေးသောဟော်မုန်းကိုတားဆီးပါ။ ဟော်မုန်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်လူတစ် ဦး ၏သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းသည်။
ACE inhibitors များသည်များသောအားဖြင့်သွေးပေါင်ချိန်နှင့်နှလုံးပျက်ခြင်းကိုကုသရန်ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားသည်။ သူတို့သည်နှလုံးရောဂါ (myocardial infarction) ပြီးနောက်သေဆုံးမှု၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Beta blockers (beta-adrenergic blocking agent) စိတ်ဖိစီးမှုအာရုံကြောစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများ၏သက်ရောက်မှုများကိုပိတ်ဆို့သည်။ ဤဟော်မုန်းများတွင် norepinephrine နှင့် epinephrine (ခေါ်သော) တို့ပါဝင်သည် adrenaline ) ။ ဤဟော်မုန်းများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်သွေးကြောများကိုအနားယူရန်နှင့်ဖြေးညှင်းစွာခွင့်ပြုစေသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် beta blockers သည်နှလုံးခုန်နှုန်းနှေးကွေးစေနိုင်သည်၊ သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းစေနိုင်သည်။
Beta blockers များသည်မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်ကိုအခြား hmnealth အခြေအနေများနှင့်အတူနှလုံးပြိုကွဲခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောနှလုံးခုန်ခြင်း၊
beta ကို blockers vs. ACE inhibitors
ACE inhibitors Beta blockers
ပိုတက်စီယမ်အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေပြီး hyperkalemia ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်
အချို့သည်ကိုလက်စထရောနှင့် triglyceride အဆင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်
သငျသညျ beta ကို blockers နှင့်အတူ ACE inhibitors ယူနိုင်သလား?
နှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်နာတာရှည်နှလုံးပျက်ခြင်းစသည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများရှိသူများအတွက်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားစေရန်သွေးပေါင်ချိန်တိုးစေရန်အတွက်ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး က ACE inhibitor နှင့် beta blocker တို့ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားသောလူနာ ၇၅% သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သွေးပေါင်ချိန်သို့ရောက်ရန်ပေါင်းစပ်ကုထုံး (ဆေးတစ်မျိုးထက်မက) လိုအပ်ကြောင်း၊ သွေးတိုးရောဂါ၏အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ဂျာနယ် ။ ဤပေါင်းစပ်ကုထုံးသည် ACE inhibitors နှင့် beta blockers များကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ရယူခြင်းသို့မဟုတ် angiotensin receptor blockers (ARBs) ကဲ့သို့သောအခြားသွေးဖိအားဆေးဝါးများသောက်သုံးခြင်းတို့ပါဝင်နိုင်သည်။
ACE inhibitors နှင့် beta blockers များသည်ကွဲပြားခြားနားစွာအလုပ်လုပ်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်။
ACE inhibitors နှင့် beta blockers နှစ်မျိုးလုံးသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်းကြောင့်မူးဝြေခင်းနှင့်မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင်သို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်လျှင်ဆရာဝန်နှင့်စကားပြောခြင်းသည် beta blockers သို့မဟုတ် ACE inhibitors များသည်သင့်အတွက်မှန်ကန်မှုရှိ၊ မရှိဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ACE inhibitors သည်သွေးပိုတက်စီယမ်ပမာဏကိုမြှင့်တင်ပေးသောကြောင့်ကုသမှုကာလအတွင်းပိုတက်စီယမ်ပမာဏကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ပိုတက်စီယမ်ဖြည့်စွက်ဆေးများသောက်သုံးခြင်းဖြင့်ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်သောဆားအစားထိုးပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်အကျွံသွေးပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Hyperkalemia သည်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအခြားကျန်းမာရေးပြtoနာများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ hyperkalemia ရောဂါလက္ခဏာများတွင်လက်များနှင့်မျက်နှာများတွင်ရှုပ်ထွေးမှုများ၊ မမှန်သည့်နှလုံးခုန်ခြင်း၊
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အချို့ beta ကို blockers triglycerides တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကောင်းသောလက်စထရော၏အနိမ့်ကျစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ယာယီဖြစ်သော်လည်းဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာခံစားနေရသောလူနာများကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေး - မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်
ibuprofen, Advil နှင့် Aleve ကဲ့သို့သော nonsteroidal anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများ (NSAIDs) နှင့်အတူသောက်လျှင် ACE inhibitors နှင့် beta blockers သည်ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ACE inhibitors, beta blockers (သို့) နှစ်မျိုးလုံးကိုသုံးပြီး NSAIDs မလုပ်ခင်သင့်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပါ။
beta blockers မှ ACE inhibitors သို့ပြောင်းသည်
တစ်ခါတစ်ရံဆရာဝန်က beta blocker အတွက်ဆေးညွှန်းကို ACE inhibitor (သို့) အပြန်အလှန်ပြောင်းပေးနိုင်သည်။
လူနာများအနေဖြင့်နှလုံးခုန်နှုန်းနိမ့်ကျခြင်းသို့မဟုတ်နှလုံးခုန်နှုန်းပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများတွင် beta blockers ပမာဏကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ် ACEi ကဲ့သို့သောအခြားသွေးဖိအားဆေးကိုသုံးနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ Atif Zafar , MD, နယူးမက္ကစီကိုတက္ကသိုလ်၏လေဖြတ်ခြင်းအစီအစဉ်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ။ အခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင်လူနာများသည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသွေးလွှတ်ကြောရောဂါ (ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသွေးကြောများ၏ stenosis ကဲ့သို့) ရှိသည့်သွေးဖိအားထိန်းချုပ်မှုအတွက် ACEi ကိုမထောက်ခံပါ။ အခြား BP ဆေးများသည်လူနာများအတွက်ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။
အချို့ လေ့လာမှုများ beta blockers မှ ACE inhibitors သို့ပြောင်းခြင်းသည်ငိုက်မျဉ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်နှင့်သိမှတ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ သို့သော်၎င်းသည် beta blockers သည် ACE inhibitors ထက် ပို၍ ကောင်းသည်ဟုမဆိုလိုပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုစီသည်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီးအခြားအခြေအနေတစ်ခုထက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကုသရန် ပို၍ ကောင်းသည်။ [ACE inhibitors] သည်ပထမအဆင့်ကုထုံးဖြစ်ပြီး Beta blockers အား BP ကိုကုသရန်ဒုတိယအဆင့်ကုထုံးအဖြစ်သတ်မှတ်သည်ဟု Dr. Zafar ကဆိုသည်။ သို့သော်သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ (CAD) သို့မဟုတ်သွေးတိုးရောဂါနှင့်စပ်လျဉ်း။ တည်ငြိမ်သော ischemic နှလုံးရောဂါရှိသောလူနာများတွင် beta blockers နှင့် ACEI တို့ကိုပထမအဆင့်ရွေးချယ်ရန်အကြံပြုသည်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဆရာဝန်၊ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူနှင့်စကားပြောခြင်းသည် beta blockers မှ ACE inhibitors သို့ပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်မသည်သင်၏ကုသမှုအပေါ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်သင်ကြုံတွေ့ရသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအပေါ် အခြေခံ၍ သင်ရွေးချယ်သင့်မသင့်ဆုံးဖြတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
မည်သည့်ဆေးဝါးများမဆိုကဲ့သို့ပင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအတွက်အလားအလာအမြဲရှိသည်။ beta blockers၊ ACE inhibitors (သို့) နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
beta ကို blocker ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး vs. ACE inhibitor
ACE inhibitor ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး Beta blocker ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစာရင်းသည်ပြည့်စုံမှုမရှိပါ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တစ် ဦး ကသင့်အား ACE inhibitors နှင့် beta blockers တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအပြည့်အစုံကိုဖော်ပြပေးနိုင်သည်။
၎င်းသည်ရှားပါးသော်လည်း ACE inhibitors နှင့် beta blockers များသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ဆက်နွယ်နိုင်သည်။ ACE inhibitors များသောက်သုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည် angioedema မျက်နှာ၏အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေသောရှားပါးအခြေအနေ။ ACE inhibitors သည်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း (သို့) သွေးဖြူဥများကျဆင်းခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်သည်။
Beta blockers များသည်ပြင်းထန်သောပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအတွက် beta blockers သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသကြားဓာတ်နည်းခြင်း (တုန်ခါခြင်း၊ beta blockers ကိုသောက်နေစဉ်အတွင်းသွေးပေါင်ချိန်နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။
သွေးတိုးရောဂါကိုကုသရန်အကောင်းဆုံးသောဆေးတစ်မျိုးတည်းမရှိသော်လည်း ACE inhibitors နှင့် beta blockers တို့သည်လူသိအများဆုံးသွေးတိုးရောဂါအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောဆေးသည်လူတစ် ဦး ၏ဆေးမှတ်တမ်း၊ ရောဂါလက္ခဏာနှင့်ကုသမှုအပေါ်မူတည်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူသည်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်သည် အကောင်းဆုံးသွေးတိုးရောဂါဆေး တစ် ဦး အမှု -by- ကိစ္စတွင်အခြေခံပေါ်မှာ။ ဤတွင်မြင့်မားသောသွေးဖိအားကုသမှုများအတွက်အများဆုံးသတ်မှတ်ထားသောဆေးဝါးများ၏စာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
beta ကို blocker ဆေးများ vs. ACE inhibitor
Vasotec (enalapril အထီးကျန်)
Capoten ( ကွမ်းခြံကုန်း )
monopril ( fosinopril ဆိုဒီယမ် )
က ( quinapril HCl )
Altace ( ရေနံချောင်း )
Mavik ( ကွမ်းခြံကုန်း )
Aceon ( erindum perindopril )
ကဏ္ral ( HCl acebutolol )
Zebeta ( bisoprolol fumarate )
တေးရေး ( metoprolol tartrate )
Toprol XL ( metoprolol succinate )
Inderal LA ( အချစ် )
လေဖြတ်ခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သွေးပေါင်ချိန်မည်မျှလျှော့ချသည်၊သွေးတိုးရောဂါ၏အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ဂျာနယ်။ ACE inhibitor (သို့မဟုတ်) beta blocker သည်သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါကသင်၏ဆရာဝန်က calcium channel blockers, diuretics, alpha blockers စသည်ဖြင့်အခြားသွေးဖိအားနည်းဆေးဝါးကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။
ထို့အပြင် လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုများ ဆေးဝါးများနှင့်အတူသွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ သို့သော်အရေးအကြီးဆုံးအချက်အနေနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်သည်သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆေးမှတ်တမ်းအပေါ် အခြေခံ၍ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကုသမှုအစီအစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားစွဲခြင်းမှခံစားနေရပါသလား။ အဆင့် ၁: Afrin ကိုချပါ
Armodafinil vs. modafinil: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
ခြေသည်းလက်သည်းမှိုအတွက် white vinegar (သို့) apple cider vinegar
တနေ့ ibuprofen ဘယ်လောက်သောက်နိုင်လဲ
မင်း prozac ရဲ့အမြင့်ကိုတက်နိုင်သလား
nabumetone ၇၅၀ မီလီဂရမ်ကိုသင်ရနိုင်သလား
အစီအစဉ်bပြီးနောက်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံနိုင်သလား